Kooxda Horseed oo soo gaartay Magaalada Muqdisho, xilli todobo ciyaaryahan ay ka soo hareen – Gool FM
(Muqdisho) 27 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Horseed ayaa dib ugu soo laabatay Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo sanadkan ka qeyb galeysay tartanka Jaamacadda Carabta.
Naadiga caawo iyo maalin ee Horseed ayaa labadii kulan ay ka dheeshay tartanka Jaamacadda Carabta waa laga soo adkaaday, inkasto ay soo bandhigeen kubadda aad u heer sarreysa, balse aysan u noqon inay guul soo helaan.
Goor dhow ayey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ka soo dagtay kooxda, iyagoo ka xun inay ka soo haraan tartanka Jaamacadda Carabta.
Waxaa jira todobo xiddig oo horey ula safray kooxda Horseed ee ka soo haray safarka ay ku yimaadeen Muqdisho, iyagoo matali doona xulka Qaranka Soomaaliya oo ka qeyb galaya kulamadda Isreeb-reebka koobka Adduunka, xiddigahaas oo kala ah Mayman, Farxaan Duqow, Ayman, Cali Cadde, Anwar Shakunda, Ibraahim Rasta iyo Mahad Shiine, dhammaan xiddigahan ayaana iminka ku sugan dalka Jabuuti.
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa lagu wada inuu la dheeli xulka Zimbabwe ciyaartaas oo dhici doonta 5 bisha September taas oo ka dhici doonta dalka Jabuuti oo guri ahaan (Home) ugu ciyaari doono xulkeenna.
Dib ayaan idinkaga soo gubdin doonnaa dhammaan xiddigaha loo magacaabay inay matalaan xulkeenna qaranka Soomaaliya sanadkaan.